Caawin Shakhsiyan ama private support – Abschir Hassan Foundation
Kahor intaanan aasaasin foundation keenan curdunka ah ,waxan si private ah Gacan uga gaysanay Familkan haysta Toban Caruur ah, Afar kamid ahna disable tahay, Sadex waxay jiradu ku bilaabtay markay jireen Dada Labo Sano, Gabadha Afaraad markay dhalatay. Labo sano kahor Aabihii Reerka ayaa Geeriyooday.
Wixi Geerida Odayga kadanbeeyay, Hooyada Noloshi familkan weyn, wayku adkaatay say u Maarayn lahayd, supply, ayadoo u dheerayd Hoy laan. Ehel Somaliyeed oo ku kala Nool, Europe, Canada iyo wadanka gudihisa, ayaa familka u Gurmaday, dhaqaale uruuriyay, Hooygan yare Maanta ku Nool yihiin u dhisay.
Sidaadka daalacan kartid sawirada iyo Videogan aynogu tabaruceen inaan Homepage kayaga kusoo bandhigno,Maanta nolol wax yar dhaanta tiihore ayay ku nool yihiin.